सर्वेन्द्र सर, अब चाहिँ साँच्चिकै कमाण्डर बन्ने कि ? – Everest Dainik
सर्वेन्द्र सर, अब चाहिँ साँच्चिकै कमाण्डर बन्ने कि ?
गत साता विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको राजिनामाको माग गरेको खबर आयो । लगत्तै अर्को खबर पनि सार्वजनिक भयो– प्रहरी प्रमुखको राजिनामाबारे विद्यार्थी नेताहरुबीच मत बाझाबाझकाे ।
प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको राजिनामा मागिनुका पछाडिको नियत या उद्देश्य जे भएपनि त्यो यहाँ चर्चाको विषय होइन, बरु चर्चाको विषय सर्वेन्द्रको कमाण्डको हो । कमाण्ड अर्थात् सिँगो प्रहरी संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र नियमन गर्ने । सर्वेन्द्रले राजिनामा नै दिनुपर्ने ‘गल्ती’ गरेका छन या छैनन्, त्यो इतिहासमा उनको भूमिकाले मूल्यांकन गर्ला । तर, बाहिर बृत्तमा एउटा आम चर्चा भने उल्लेख गर्नैपर्छ । त्यो हो– आम जनताले भने अहिले आफूले चिनेका सर्वेन्द्रलाई पाइरहेका छैनन् ।
जनता तिनै सर्वेन्द्रलाई खोजिरहेका छन् । तिनै सर्वेन्द्र खनाल, जो आफ्नो व्यवसायिक कुशलतामा अब्बल मानिएर, कैयन् सफलतामूलक काम गरेर सबैको मन जित्न सफल भएका थिए । तिनी सर्वेन्द्र खनाल, जसलाई जटिल परिस्थितिमा वस्तुस्थिति नियन्त्रण गर्नका लागि पटक–पटक खनाललाई पठाइन्थ्यो ।
विगतमा त्यसरी कतिपय जटिल घटनाहरुमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिएका खनाल मातहतको प्रहरी नै सबै भन्दाबेसी आलोचित बनेको अवस्थामा जनताले पुरानै सर्वेन्द खोज्नु स्वभाविकै हो । र, जनताको यो चाहना पुरा गर्न सक्नु प्रहरी प्रमुखको अहिलेको मुख्य चुनौती पनि ।
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकाको निशाना सर्वेन्द्र परेका छन् । तर निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान त एउटा घटना हो, देशका अन्य भूभागहरुमा समेत नेपाल प्रहरीको भूमिका देखेर, नेपाल प्रहरीले देखाएको संवेदनशीलता देखेर, कतिपय घटनामा देखिएको अराजकताको अवस्था देखेर मानिसहरुले प्रहरीमाथि आलोचना शुरु गरेका छन् ।
प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो, त्यसरी विगतमा कुशल भूमिका निर्वाह गरेका खनाल नै प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि किन यस्तो ? किन उनको कमाण्डमा प्रहरी झनै चुस्त, दुरुस्त र जन उत्तरदायी हुन सकेको छैन । किन उनको चेन अफ कमाण्ड भत्किएको छ ? किन उनले तहतको संगठनलाई पूर्ण अनुशासनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
किन नेपाल प्रहरी विगत जस्तै छ, किन हुनेखानेहरुको मात्रै कुरा सुनिन्छ र आम जनतामा अहिले पनि ‘मुम्बईया पुलिस’को छवि कायमै छ ? किन मानिसहरुमा प्रहरीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ ? र, प्रहरी संगठनलाई बदनाम गर्न खोज्ने तत्वहरु सक्रिय भएका छन् । के कुराले प्रहरीलाई साँच्चिकै जनताको संरक्षक बन्नबाट रोकेको छ ?
यी प्रश्नहरु अहिले आमरुपमा चर्चामा आएका विषय हुन । र, त्यही अनुरुप जनताले विगतको सर्वेन्द्र खनाललाई खोजेको हुन् । मधेश आन्दोलनको रापमा दुई नम्बर प्रदेश जलेको बेला, धनुषा आन्दोलनकारीको कब्जामा परेको थियो । त्यो बेला उनले कुशलतापूर्वक केन्द्रबाट गएर त्यहाँको अवस्था सम्हालेको जनताले सम्झेका छन् ।
कुमार घैंटेको इन्काउण्टरदेखि लागूऔषध र अपहरण काण्डका अभियुक्त जेलबाट भागेका रावणजीत तामाङलाई गोली हानेर पक्राउ गर्न सफल खनालले यस्तै थुप्रै अप्रेसन सफलता पूर्वक गरेको तुलना अहिलेको उनको भूमिकासँग गरिनु स्वभाविकै हो । अझ निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरी नै शंकामा रहेको बेला मानिसहरु उनले कुनैबेला पैसामा खेल बेचेर सबै देशको इज्जत फाल्ने फुटबल खेलाडीमाथिको ठूलो र जोखिमयुक्त अप्रेसन गरेको घटना सम्झिन्छन् ।
जनताले विगतको सर्वेन्द्र खनाललाई खोजेको हुन् । मधेश आन्दोलनको रापमा दुई नम्बर प्रदेश जलेको बेला, धनुषा आन्दोलनकारीको कब्जामा परेको थियो । त्यो बेला उनले कुशलतापूर्वक केन्द्रबाट गएर त्यहाँको अवस्था सम्हालेको जनताले सम्झेका छन् ।
म्याच फिक्सिङ धन्दा समाप्त गर्न सफल उनको त्यो अनुसन्धान नेपालको फुटबल इतिहासमा नै दर्ता भएको छ । यतिबेलै नाकाबन्दीको फाईदा उठाउँदै कालोबजारी र ठगी गर्नेहरुको संरक्षक बने सहसचिव रामआधार साहमाथि उनको अप्रेशन चल्यो, पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प सञ्चालकहरुले तेलको मात्रा कम गरि बच्ने उपकरणहरु रिमोट, रिसिभर, डिभाईस, गियर, स्विच, कोड र सेफ्टी पिन जडान गरी उपभोक्ता ठग्नेलाई पनि उनले कानुनी दायरामा ल्याए ।
यस्ता कैयन् घटनाहरु छन्, जमिम शाहको हत्यामा आरोपित जगदिश चन्दको पक्राउदेखि ललितपुर बडिखेलको १२ वर्ष पुरानो सामूहिक हत्याकाण्डको पर्दाफास गरिनु उनको सफलता थियो । युनिटी लाईफको पर्दाफासदेखि कुख्यात भारतीय अन्डर वर्ल्ड नाइके बब्लु दुबेलाई पक्राउ गर्न सफल खनालले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई समेत कुशलतापूर्वक नयाँ मोड दिएको घटना अहिले मानिसहरु सम्झिन बाध्य छन् ।
त्यसो भए यति कुशलतापूर्वक अनुभव बटुलेका खनाल अहिले किन कमाण्ड लिन सकेका छैनन त ? जबकि अहिले त उनका लागि झन सहज वातावरण थियो । उनलाई विश्वास गरेर उनको विगतको इतिहासको मूल्यांकन गरेर उनी प्रमुख भएका हुन् ।
अर्कोतर्फ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छन्, जसलाई व्यक्तिगतरुपमा केही लाभहानी लिनु छैन । बरु उनले समाजलाई अग्रगति दिन नै जीवन उत्सर्ग गर्दै आएका छन् । यता खनालको व्यवसायिक अनुभव र उता गृहमन्त्री राम बहादुर थापा हुन । यो संयोगले त झनै प्रहरी प्रशासन चुृस्तरुपमा अघि बढ्नु पर्ने हो ।
गाउँ गाउँ, टोलटोलमा टोले गुण्डाहरुको सातो जानुपर्ने हो, कालो बजारीहरु त्राहीमाम हुनुपर्ने हो, हिंसामा पूर्ण कमी आउनुपर्ने हो, तस्करहरु खोरमा जानु पर्ने हो । कहिँ कतै हत्या हिंसा भएमा तत्कालै त्यसमा तदारुकताका साथ अनुसन्धान भएर हत्यारा जेलमा पुग्नुपर्ने हो ।
निर्मला जस्ता चेलीहरु बलात्कृत हुँदा त्यसमा कडा किसिमले प्रहरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो ।
नेपालका इतिहासमा आफ्नो विशिष्ट क्षमता र कुशलता देखाएका गृहमन्त्रीको इतिहासलाई जोगाउनेसँग समेत जोडिएको छ । राजनीतिमा जसरी राम बहादुर थापा एउटा अनुपम उदाहरण हुन, त्यस्तै प्रहरीमा खनाल भएको अवस्थामा खनालले आफ्ना आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता यतिखेर सिर्जना भएको छ ।
निर्मलाको घटनामा प्रहरीको कमजोरी र तदारुकता दुबै देखिएपनि देशभरिका अन्य बलात्कार घटनामा प्रहरीले हुनेखानेहरुलाई संरक्षण दिएका घटना सार्वजनिक हुनु नपर्ने हो । नेपालमा अहिले पनि हुनेखाने र पहुँच राख्नेहरुको चङ्गुलमा न्याय छ । न्याय व्यवस्थामा आम दुखी गरिबको पहुँच हुन सकेको छैन ।
एकजना महिला बलात्कृत भएपनि उसको मुद्दा सोझै दर्ता हुनुभन्दा उसलाई बलात्कार गर्नेको स्वर प्रहरीले पहिला सुन्ने अवस्था विद्यमान छ । यो कुराको अन्त्य गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष प्रशिक्षण र निर्देशन देशैभरि दिनुपर्ने हो । जनतामा ओहो, खनाल प्रहरी प्रमुख हुँदा त यस्तो पो फरक भयो भन्ने अनुभूति हुनुपर्ने हो । तर, बिडम्बना त्यसो देखिएन ।
विगतमा जुन छवि खनालले बनाएका थिए, उनले त्यो छवि खस्किने कुनै अपराधिक काम नगरेका भएपनि उनको त्यो स्पिरिट, त्यो जोश र त्यो कुशलताको पूर्ण सदुपयोग भएको अनभूति हुन नसक्दा अहिले एउटा अनुसन्धानको घटनामा उनको राजिनामासम्मको कुरा उठनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो विषयमा खनाल गम्भीर बन्नै पर्छ ।
किनभने यो खनालको इतिहास जोगाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन । बरु यो नेपालका इतिहासमा आफ्नो विशिष्ट क्षमता र कुशलता देखाएका गृहमन्त्रीको इतिहासलाई जोगाउनेसँग समेत जोडिएको छ । राजनीतिमा जसरी राम बहादुर थापा एउटा अनुपम उदाहरण हुन, त्यस्तै प्रहरीमा खनाल भएको अवस्थामा खनालले आफ्ना आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता यतिखेर सिर्जना भएको छ ।
खनालका अगाडि सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नौ संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ठूलो चुनौती रहेको छ । एउटा कुशल टीमको निर्माण गर्ने, चेन अफ कमाण्ड बलियो बनाउने, जनउत्तरदायी प्रहरी संगठन निर्माणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, देशैभरि शान्ति सुरक्षा, तस्करी, कालाबजारीविरुद्ध सिँगो संगठनलाई परिचालन गर्न विशेष अभियान चलाउने र आम जनतामा एउटा नयाँ प्रकारका अनुभूति दिने चुनौती उनका सामु रहेको छ ।
खनालका अगाडि विगतको इतिहास जोगाउँदै नयाँ इतिहास बनाउने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ । त्यसका प्रशस्त सम्भावना र सकारात्मक वातावरण पनि छ । तर, यो कार्यमा उनी कति खरो उत्रिन्छन् त्यसका लागि भने उनले कस्तो रणनीति र आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ ।
हिजो खनालसँग एउटा एकल अभियान या मिशन हुन्थ्यो । उनले मातहतका प्रहरीको मात्रै कमाण्ड गर्थे । आफूले पूर्ण रुपमा कुनै विशेष अभियानको जिम्मेवारी र कमाण्ड लिन्थे । तर अहिले उनका अगाडि सिँगो संगठन छ । एउटा एकाई या मिशनको कमाण्ड र सिँगो संगठनको कमाण्ड बिल्कुलै फरक कुरा हो । अब उनले कुनै एउटा विशेष मिशनलाई सफल पार्ने रणनीति जस्तै सिँगो संगठनलाई नै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य राखेर जनमुखी बनाउने मिशनको रणनीति बनाउन जरुरी छ ।
सँगसँगै गृहमन्त्रीको नियत, उद्देश्य, राजनीतिक लक्ष्यलाई आत्मसात गरेर सोही अनुरुप जनपक्षीय प्रहरको संरचना र कार्यशैलीको विकास गर्न उनले के कसरी अगाडि बढ्छन् भन्नेमा यो निर्भर देखिन्छ । आम मानिसहरुले पनि यही भनिरहेका छन्– सर्वेन्द्र सर, अब चाहिँ साँच्चिकै कमाण्डर बन्ने कि ?